Dhaawacyo la soo gaarsiiyay Baardheere iyo Ciidamada Kenya oo wada Howlgalo – SBC
Dhaawacyo la soo gaarsiiyay Baardheere iyo Ciidamada Kenya oo wada Howlgalo
Posted by Webmaster on December 6, 2011 Comments
Gudaha Magaalada Baardheere ee gobolkaasi gedo ayaa maanta waxaa la soo gaarsiiyay dhaawaca dad iyagu ku wax yeeloobay dhowr maal mood ka hor duqeyn diyaaradaha Dowlada Kenya ay ka geysteen degmada Ceelcade.
Saraakiil caafimaad oo ku sugan gudaha Baardheere ayaa xaqiijiyay in dadkani dhaawaca ah ee la soo gaarsiiyay Baardheere ay ku u dhaafayaan tiradooda 9 qof, waxaana dadkaasi ay qabaan dhaawacyo kala gedisan, waxaana qaarkood ay yihiin kuwo qaba dhaawacyo culus.
Maalmo ayay dadkani dhaawac ku ahaayeen deegaanka miyiga deegaaka Ceel cade maadaama aysan halkasi laheyn isbotaalo lagu daweeyo dhaawacyada culus ama ay taal dawo ku filan.
Sikastaba ha ahaatee marka laga yimaado dhaawaca maanta la keenay gudaha Baardheere waxaa hadana jira dad iyagu kor u dhaafaya 5 qof oo ku dhintay duqeymaha ay diyaaradaha cirka ay ka geysteen deegaankaas ceel cade .
Dhinaca kale Ciidamada Dowlada Kenya ayaa Howlgalo baaxad leh ka sameeyay xadka kala qeybiya Labada wadan Waa Soomaalia iyo Kenya .
Howlgalada ayaa ahaa kuwo ay ka qeyb qadanayaan ciidamo militeri ah oo aad u tiro badan iyadoona ay ku dhaqaaqayeen in ay galaan deegaanada xadka ka ag dhow kuna sameeyaan baaritaano xoogan .
Waxay sheegeen saraakiil u hadlay ciidamadaasi in howlgaladan ay uga golleeyihiin xaqiijinta amanka iyo dabagalka kooxihii ka dambeeyay qaraxyo dhowaan lagu qaaday xeryaha qaxooti iyadoo kii ugu dambeeyay uu ka dhacay gudaha mandheera.